ကိုယ့်သွားတိုက်တံကို တစ်ခြားသူတွေနဲ့ မျှဝေသုံးစွဲသင့်သလား? – Sunthit Myanmar
ကိုယ့်သွားတိုက်တံကို တစ်ခြားသူတွေနဲ့ မျှဝေသုံးစွဲသင့်သလား?
လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးအလေ့အကျင့်တွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပဲ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးအတွက် ကိုယ်ပိုင်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်း ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေထဲမှာ သွားတိုက်တံကလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ပါပဲ။
သွားတိုက်တဲ့အခါမှာ သွားတွေကို ဖြူဖွေးသန့်စင်ဖို့အတွက်သာ အဓိကထားကြပါတယ်။ သွားတိုက်တံသန့်ရှင်းမှုကိုတော့ အလေးထားသူနည်းပါးပါတယ်။ သွားတိုက်တံအမွှေးလေးတွေမှာ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေ ဘယ်လောက်တွယ်ကပ်နေလဲဆိုတာကိုတော့ ဘယ်သူမှခန့်မှန်းကြည့်ဖူးကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သွားတိုက်တံက နေ့စဉ်သုံးစွဲနေရတဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းဖြစ်တာကြောင့် မိမိကိုယ်ပိုင်သီးသန့် သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ တခြားသူတွေနဲ့ မျှဝေသုံးစွဲတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့အစာအကျွင်းအကျန်တွေနဲ့ ပိုးမွှားတွေက သွားတိုက်တံမှာ ကပ်ငြိကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး သင်အသုံးပြုတဲ့အခါ သင့်ပါးစပ်ထဲကို ဝင်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ပိုးမွှားတွေ ပါးစပ်ထဲဝင်ရောက်လာတာနဲ့အမျှ အလွယ်တကူဖျားနာနိုင်ပြီး အူလမ်းကြောင်းကိုလည်း ထိခိုက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိမိနေ့တိုင်းသုံးစွဲနေရတဲ့ သွားတိုက်တံကို ဘယ်သူနဲ့မှ မျှဝေမသုံးစွဲသင့်ပါဘူး။
Published December 8, 2017 By sanlenaing
Categorized as Health Tagged ကိုယ့္သြားတိုက္တံကုိ တစ္ျခားသူေတြနဲ႔ မွ်ေဝသံုးစြဲသင့္သလား?